Soo-dejinta Ants De Havilland Tiger Baalal DH-82A v1.1 FSX - Rikoooo
Nooca 1.1. Baalalkii Tiger ee FSX waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican add-on freeware that can be found on the Internet.
Tani waa wakiil a casriga ah ee lagu daydo Australian in aan maanta ka heli kartaa, sidaas darteed waxaa ka mid ah qaar ka mid ah muuqaalada dheeraad ah oo aan ku asalka ah waqti hore.
The de Havilland DH82 Tiger balanbaalis ahaa biplane ah 1930s loogu by de Havilland iyo kuwo kale loo isticmaalo by diyaaradaha Royal Air Force sida bilowga dugsiga iyo drive. Wuxuu ku sii jiray adeeg la RAF ilaa 1952, markii badan oo iyaga ka mid ah ayaa loo isticmaalaa in Duulista.
Si aad u guurto camera ee bidixda: + wareejin ctrl + boos dib.
Si camera ku dhaqaaqo xaq u leedahay: + wareejin ctrl +
It is very important to read the manual included in the main folder of the add-on, or from the Start menu then rikoooo add-ons.